GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Moore Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
1. Ebe ọ bụ na e kere anyị n’onyinyo Chineke, olee ihe anyị ga-emeli?
Ọ BỤRỤ na a mụọ nwatakịrị, ya eyie papa ya, ndị mmadụ na-asị na ọ bụ oyiri nna ya. Nke bụ́ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị na-eyi mama ha na papa ha. A sị ka e kwuwe, nwatakịrị ọ bụla a mụrụ nwere àgwà papa ya na mama ya ọ na-akpa. Ọ bụ Nna anyị nke eluigwe, bụ́ Jehova, nyere anyị ndụ. (Ọma 36:9) Anyị bụ́ ụmụ ya nwekwara ọtụtụ ụzọ anyị si yie ya. Ebe ọ bụ na o kere anyị “n’onyinyo” ya, anyị ga-echebaliri ihe echiche, kpebie ihe anyị ga-eme, ma meta ezigbo ndị enyi.—Jen. 1:26.
2. Gịnị mere o ji kwe omume na anyị na Jehova ga-abụ ezigbo enyi?
2 Jehova nwere ike ịbụ ezigbo Enyi anyị. Ihe mere ọ ga-eji kwe omume bụ na Chineke hụrụ anyị n’anya. Ihe ọzọ abụrụ na anyị nwere okwukwe na Chineke na n’Ọkpara ya. Jizọs kwuru, sị: “Chineke hụrụ ụwa n’anya nke ukwuu nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka e wee ghara ibibi onye ọ bụla nke nwere okwukwe na ya, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.” (Jọn 3:16) E nweela ọtụtụ ndị ha na Jehova dị n’ezigbo mma. Ka anyị tụlee banyere mmadụ abụọ n’ime ha.